WARBAXIN EXCLUSIVE AH: PART 3 Dhibaatooyinka Shirkadaha Macdantu Ku Hayaan Deegaanka iyo Dadka Reer Fiqi Ayuub, Togdheer.
Tuesday November 05, 2019 - 22:51:33 in Wararka by Shaqaalaha Burcoonline News
Macdanta Jade-ka Somaliland iyo Myanmar (Burma) maxaa ka dhexeeya?
Waxaan isbarbardhig ku sameynayaa Somaliland iyo waddanka la yidhaahdo Myanmar(Burma), waddankan Burma oo laga helo dhagaxa Jade-ka, shirkado Shiine ahina ka qotaan dhagaxan. Macdanta JADE-ka waa macdan la isticmaali jirey qarniyaal waxaana laga helaa waddamo kooban. Jade-ka adduunka ugu qaalisan waxaa laga helaa Myanmar (Burma) oo shiinaha la deriska ah. Dadka shiinuhuna dhaqan ahaan ayey guryaha ugu haystaan, waxayna aaminsan yihiin in Jade-ku shaydaanka ka xijaabo, la iskuna daaweeyo. Waddanka Burma ee Jade-ka laga keeno waxaa ka taliya dawlad militari ah oo keli talis ah, dadkeedu sida Somaliland ma haystaan xoriyad ee waxay ku hoos nool yihiin cabudhin iyo cadaadis xad-dhaafa oo aan adduunyada maanta ka dhicin. Macdanta Jade-ka ee waddankani qaniga ku yahay waxay gacanta u gashey shirkado Chines ah oo sidey doonaan ka yeeley dhulkii, ka dib markii ay la heshiiyeen ciidamadan dalka haysta. Shirkadaha Shiinaha waxaa maalgeliya dawlada shiinaha oo guud ahaanba werwer dhaqaalena ku haysa adduunyada. Saraakiisha milateriga ee Myanmar (Burma) qaar ka mid ihi waxay si musuqmaasuq ah iyagoo ku gabanaya awoodii dawladda saami ku leeyihiin shirkadahan oo waxaa soo gala malaayiin doolar, waana kuwo ku mamey ku takrifalka awoodda dawladda iyo lunsiga hantida dadka masaakiinta ahaa ee dhulkoodii iyo macdantoodii laga fara-maroojiyey. Shirkadahan Shiinaha ah ee mashaariicda Jadeka ka wada Burma iyagaa si dadban u maamula meelaha laga qodo dhagax Jade-ka, waxayna ku milmeen maamulkii. Shirkadahani waxay si musuqmaasuqa oo tahriibeysan dalka uga saaraan macdan Jadeka, tusaale ahaan 80 % macdanta laga soo saaro mandaqada Hpakant waxaa Shiine loo dhoofiyaa iyadoo kontrobaan tahriibeysan ah (According to research by Global Witness, jade industry sources report that up to 80 percent of the jade from Hpakant continues to be smuggled to China. Mining machinery used in Hpakant’s jade mines are therefore likely employed in mines from which a significant share of the jade is smuggled. Machinery that end up in this area is thus likely part of an illegal supply chain. Providers of mining machinery must recognize this.”.
Hadaba suurtagal ma tahay in Jade-ka Somaliland dekada Berbera si kootarobaan ahaana looga dhoofiyo iyadoon dawladu la socon amaba qeyb ka yihiin. Shirkadaha Shiinuhu waxay caan ku yihiin laaluushka iyo musuqmaasuqa, markaa waxaa dareenkeeda leh in arrintani dhici karto. Macdanta Jade-ka ee laga jebiyo buuraha Fiqi-ayuub xisaabtooda oo sax ah ma filaayo in la hayo maadaama Shiinuhu gacantooda ku maamulanayaan sida ay ku sameeyeen Burma oo kale. Waxaana reer Burma nasiib darro u ah in dadkii shicibka ahaa ee dhulkan deganaa qasab looga bara-kiciyey dhulkoodii, kheyraadkoodiina loo gurtey iyadoo aan waxba lagu soo celin. Dadka sidaas kheyraadkoodii loo nuugayona awood uma laha in cabashadooda iyo tabashadooda muujiyaan, waa dad ku nool dulmigii ugu daraa dunida, ayna adag tahay jid ay uga baxaan. Dalkan Burma dadkiisu wuxuu dhan yahay 55 milyan, wuxuuna ku jiraa wadamada ugu musuqmaasuqa badan, waxaana u sii raaca xukun militari oo dadkii dusha ka fuuley, hantidii umada ee macdanta Jadeka ka soo gasheyna waxay ku dhacdey saamileyda shirkadaha oo askartu qeyb ka tahay.
Xaga Somaliland haddaan eegno mar hadii macdantu macdantii tahay, shirkaduhuna Shiine yihiin, waxaad moodaa in habdhaqankii yaaley Burma la soo minguuriyey oo dhulka la keeney. Shirkadaha iyo wasaarada macdantu nidaamka maamul ee ay wax u wadaan madmadow badan oo tuhunkiisa leh ayaa ka muuqda, waayo marna lama soo bandhigin xisaab daahfuran iyo maamul wanaag dadku wada arkayaan (accountability and transparency). Dumuqraadiyadda Somaliland qaadatey waxaa asal ah oo lagu qiimeeya daahfurnaan maamul, ilaalinta xuquuqda binidaamka iyo xoriyada hadalka sida saxaafada. Maadama sharcigii dalkan u dhignaa sidaa dhigayo, waxaad mooddaa in lagu talagaley in gebi ahaanba meesha laga saaro xuquuqdii dadka reer Fiqiyuub xaqa u lahaayeen maadaama hantidoodii dabiiciga ahayd la iska gurtey sida ku dhacdey reer Burma. Dadka reer Fiqi-ayuub waxay mashruucan ka filayeen in hantida ka soo baxda lagu horumarin doono degaankooda, maamulkuna ku shaqeyn doono hufnaan, maamul wanaag iyo isla xisaabtan dhab ah, taasina ma dhicin.
Mashaariicda macdantu waxay ka mid yihiin mashaariicda ugu khatarsan adduunyada, waana in si taxadar aqooneed leh loo fuliyo si loo ilaaliyo xuquuqda bini’aadnimo, iyo tan degaanimo. Xuquuqda bini’aadamka iyo waxyeelada degaanku waa isku xidhan yihiin. Hadii degaanka noloshaadu ku xidhan tahay lagu xadgudbo oo la baabi’iyo noloshaaduna khatar gasho ama waxyeelo soo gaadho, waxaa lagu xadgudbey xuquuqdii aasaasiga kuu ahayd, tusaale hadii buuraha Sirgo iyo Goodirood ay noqdaan lama degaan marka Jade-ka lagala baxo, dadkii degaanka lahaana aan waxba loogu bedelin, waxaa lagu xadgudbey xuquuqdii bini’aadamnimo, iyo kii degaan, iyadoo laga indha qarsanayo shuruucda dalka iyo tan caalamiga ahba.
Shirkadahan Shiinaha ah ee macdanta ka qota Burma waxaa baadhis cilmiyeysan ku sameeyey hay’ada la yidhaahdo Swedwatch oo Sweden laga leeyahay, ahna hay’ad calami ah. Hay’adani waxay dabagashaa oo baadhis ku sameysaa dunuubta laga galo degaanka(bay’ada) iyo bin’aadamka, waayo degaanka iyo nolosha bini’aadamku waa isku xidhan yihiin sidaan sheegey, hadii dhulka la sumeeyo ama la dhalan-rogo nololi ka suurtoobi meyso. Hay’adani waxay iftiimisey in xuquuqdii dadka iyo degaankaba shirkadaha shiinah ahi iyo xukuumada Burrmaba ku xadgudbeen, iyadoo 240 000 qof laga bara-kiciyey degaankii ay ku noolaayeen gaar degaanka degmooyinka la yidhaahdo Rakhine, Kachin iyo Shan state. Warbixintaas waa mid calami ah oo qof waliba heli karo. Hadaba, anigu warbixinta waxba ku dheeraan maayo laakiin waxaan hoos ku soo bandhigaa sida shirkaduhu dhulkii uga dhigeen dhul aan nololi ka suuroobin doonin, dadkiina looga rarey dhulkoodii ay ku noolaayeen jiil ilaa jiil.
Myanmar : Population: around 55 million , Ethnic groups by percent: Burman (68), Shan (9), Karen (7), Rakhine (4), Chinese (3), Indian (2), Mon (2), Literacy rate: 75.6 percent School , life expectancy: 8 years UNDP Human Development ranking: 145 (of 185) , Corruption Perception Index ranking: 130 (of 180) , Internally displaced people within Myanmar: Over 240 000 (mainly in Rakhine, Kachin and Shan state) .
Sida kor ka muuqata waxaa gobolada Rakhine, Kachin and Shan state oo laga qodo macdanta Jade-ka ka barakacey dad gaadhaya 240 000 qof. Barakacaas waxaa sabab u ahaa buurihii Jade-ka laga qodaayey oo markii roobkii heley soo rogmadey iyagoo ah ciid, dhooqo iyo dhagxaan ah, dhulkiina wuxuu isu bedeley lama-degaan sumeysan oo aan nolol ka suurtoobeyn. Dadka Burma ka barakacey dawladooda ayaa meelihii dhibaatadu ka dhacdey ka rartey oo degaamo kale ku degaameysay. Hadi masiibadani oo kale ka dhacdo buuraha Fiqi-ayuub maxaa dawlada qorshe uga meel yaal sidii dadka laga yeeli lahaa, ma filaayo in tiraba lagu darey arinkaas.
Sidaan kor ku sheegey, Myanmar (Burma) waxaa baadhis (research) ku sameeyey Swedwatch, waxayna yidhaahdeen: "This report is the result of research on Myanmar and the impacts of mining on communities and the environment. Research has also been conducted on the providercustomer relationship and the responsibilities therein. The report focuses on providers in order to explore and increase awareness of the possibilities that exist to prevent and mitigate adverse human rights impacts of their products. Swedwatch researchers visited two areas engaged in mineral extraction in Myanmar, one jade and one copper mining area in Kachin state and Sagaing region, respectively, in 2017. These constitute two of Myanmar’s most lucrative mining areas.26 As Myanmar’s government formally prohibits foreigners from entering most mining areas, particularly when they overlap with armed conflict zones, Swedwatch was unable to make on-site visits to the jade mines in Hpakant township. Due to the ongoing armed power struggle between the Myanmar army and the KIA throughout.”, Warbixintan waxaa laga heli karaa Link hoose:
Markaan isbarbardhig ku sameeyey shirkadaha Shiinaha ee ka shaqeeya Burma iyo Somaliland, waxaa sida qoraxda u muuqda in labaduba ku xad ku gudbeen xeerarka caalimka u degsan ee ku saabsan shaqaalaha iyo degaanka (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights), weliba waxaa Somaliland u sii dheer inaanba la sameyn waxa loo yaqaano EIA (Environmental Impact Assessment) oo ahayd in la sameeyo intaan shaqaba la bilaabin. Wasaaradda macdanta ee Somaliland waxaa looga baahnaa in ay shirkadaha macdanta qota ku ilaaliso shuruucda dalka u degsan iyo kuwa caalamiga ahba, waxaana qawaaniintan ka mid ah:
Enact policies or legislative measures to require mining companies to carry out ongoing environmental impact assessments that include or complement human rights impact assessments that meet the highest international standards.
Actively protect human rights that may be impacted as a result of mining, includ - ing implementing an adequate framework for land acquisition that is based on international standards on the right to land, adequate housing, water, livelihood and the prohibition of forced evictions.
Protect women and girls from sexual exploitation in the jade mining area and in other mining regions. Ensure that medical treatment and psychosocial support are available to victims of sexual abuse and are tailored to young victims.
Enforce requirements on mining companies to regularly provide lists on the number and nature of mining machinery that is employed at each mine site.
Align National Action Plan on Business and Human Rights with the language of the UNGPs, and make sure it provides effective guidance to companies on how to address human rights risks and impacts.
Implement mechanisms to support safe artisanal jade mining that preserve miners’ right to livelihood; they should not impose onerous administrative or financial requirements.
Explore legal arrangements that allow mining equipment companies to recall their products if the products are found to be used in circumstances that have severe negative impacts on human rights and the environment.
Aduunyadu waxay u aragtaa shirkadaha macdanta qoda in ay halis bini’aadam iyo mid degaanba gacmaha kula jiraan. Sidaa awgeed ayaa loo dejiyey qaawiniin iyo tusmayaal la raaco si loo ilaaliyo bedqabka dadka iyo degaanka sida ku xusan qodobada kor ku xusan. Shirkadaha macdanta ee ka howlgala buuraha Fiqi-ayuub dhamaantood waa ku xadgudbeen shuruucda u dejisan UN-ta iyo tan dalkaba. Dawlada Somaliland ee shirkadahan ogolaashaha siisey waxay ahayd in ay ku ilaaliso sharciga, nasiib daro wasaarada macdantu wey dayacdey mas’uuliyadeedii, hantidii qarankana war looma hayo meel ay ku maqan tahay.
Khatarta ku soo fool leh Deegaanka Ceelbaxay
Ceelbaxay waa tuulo ka tirsan gobolka Saaxil, waxayna hoos tagtaa degmada Laas-ciidle, waana barkulan ay isugu yimaaddaan labada tog ee kala ah Xagare iyo Cilaan-biddoole. Labadan togba xagooda sare waxaa degan shirkadaha macdanta oo kaamam ku leh. Shirkadahu waxay toga ku daadiyaan ama ku aasaan qashinka iyo waxyaabaha ka hadha marka buurta la qarxiyo. Qashinka hadhaaga ah marka roobku da’o banaanka ayuu u soo baxayaa, wuxuu soo raacayaa biyaha togaggu soo rogaan xili roobaadka. Labada togba biyahoodu waxay isugu imanayaan Ceelbaxay waxayna halis gelinayaan dadka iyo xoolaha oo ka caba, maadama ay biyaha soo raacayaan qashin iyo sun. Shirkadahani waxay u muuqdaan inaaney sinaba uga fekerin dhibaatada qashinkani keeni karo mustaqbalka. Dadka iyo xoolaha dhulkan degani waxay maanta haystaan biyo ka soo baxaya dhul nadiifa oo dabiici ah, laakiin sida muuqata dhowaan biyaha nimcada ah ee la haysto waa la waayi doonaa sida ku dhacdey dadka degan Burma. Sida sharciga UN-tu dhigaayo dadku waa in ay helaan biyo nadiifa ah, waxayna ka mid yihiin xuquuqaha aadamiga. Biyaha nadiifta ahi way ka horeeyaan wax walba oo qofku u baahan yahay sida caafimaadka oo kale, sharciga caalamkuna wuxuu dhigayaa sidan (According to the UN General Assembly regulation, access to clean water and sanitation is a human right and a precondition for the enjoyment of other human rights, such as the right to health).
Sidaa aawadeed, markaan booqanay kaamamka ay shirkadahani ku leeyihiin labadaa tog ee biyo mareenka ah, waxaa noo cadaatey in guud ahaanba shirkadahani ku xudgudbeen shuruucda caalamiga ah ee u taala ilaalinta degaanka iyo in dadku biyo nadiif ah helaan. Waxaa tusaale inoogu filan wadanka Burma sidey shirkaduhu u wasakheeyeen biyihi dadka ka cabi jireen. Nin ka mid ah dadka degan magaalada Hpakant ee Burma ku taala ayaa wuxuu leeyahay sidan "It used to be so beautiful here. These rivers used to be clean and see-through. We used to fish and swim. Now there is no water anymore, just a big slow river of mud [created by the mining waste]. Nobody dares to drink from them now.” Sidoo kale ninkani wuxuu sheegayaa sida shirkaduhu qashinka ugu aasayaan meelaha biyuhu maraan wuxuuna yidhi "When they dump mining waste in the rivers, the natural currents are disrupted. The water stalls and gets polluted.”. Ninkaasi isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu ka sheekeynayaa sida buurahoodii loo jejibiyey oo loo qaatey wuxuuna yidhi sidan "Many, many mountains disappear. One day the mountain is there, but a few weeks later there is just a big hole. We don’t know the natural paths of the rivers anymore because the landscape changes whenever they find jade. We get erosion, landslides and flooding instead.”. Ninkan reer Burma wuxuu ka sheekeynayaa siduu dhulku u qurux badnaa, oo manaafacaadkiisu u badnaa, nadiifna u ahaa laakiin maanta shirkadaha macdantu gebi ahaanba wasakheeyeen dhulkii oo xitaa biyo aan laga cabi kareyn. Ninkani dhulka uu ka hadlayo shirkadaha ayaa ku aasey qashinkii soo hadhey. Haddii Burma oo la aqoonsan yahay sidaa tahay, muxuu warkeedu noqonayaa buuraha Fiqi-ayuub, oo ku dhextaala wadan aan aqoonsaneyn.
Sida caadada ah ama waxaa qasab ku ah shirkadaha macdanta dhulka kala soo baxa in ay dhulka sidiisii ku celiyaan, lacag qadimaad ahna meel u dhigaan degaanka oo laga hayo ("The mining companies must have a recovery plan and deposit money to clean up when they end a mine site). Wasaarada macdanta ayey ahayd inay daraasadda ku darto lacagta degaanka bedqabkiisa loogu tala galey. Baadhis aan ku sameeyey arrinkaa, waxaan filayaa inaan cidiba ka fekereyn arinkan aan ka hadlaayo ee lagu foogan yahay oo keliya sidii shirkadaha Shiinaha hanti looga heli lahaa, hantidaasna lama yaqaano meeley martey.
Si magaalada Ceelbaxay dadka degan, reer baadiyaha iyo degaankaba loo badbaadiyo, waxaa loo baahan yahay in si qoto dheer looga fekero, sidii qashinka lagu daadiyo labada togba (Xagare iyo Cillaanbidoole) xal loogu raadin lahaa. Way muuqata in qashinka iyo hadhaaga qaraxa buurta lagu daadiyo gaar ahaan goobaha shaqada buurjebintu ka socoto. Hadaan hada si cilmiyeysan wax looga qaban, maxsuulku wuxuu noqon doonaa in ay dhacdo masiibo degaan iyo mid bini’aadan oo aan waxba laga qaban karin. Qashinkan iyo kimikada dhulka falgashey waxay abuuri karaan cuduro badan oo aan noocyadooda dhulka horey loogu arag oo ku dhici kara dadka iyo xoolahaba. Waxaa nasiib daro in wasaarada macdanta iyo shirkadahuba aaney mas’uuliyadba iska saaran sidii degaanka loo ilaalin, dadka degaanka noolina waa dad dan yar oo aqoon u lahayn arintan aan ka hadlaayo. Waxaa xaq loogu lahaa shirkadaha wacyi gelin dhameystiran si dadku xog-ogaal ugu noqdaan dhibaatada ka iman karta soo saarida macdanta Jade-ka.
Wadanka Shiinaha waxaa ku dhaqan dad ka badan 1 bilyan oo qof, waxaana ku yaala warshado aad u badan. Qashinka ka soo baxa wershadahaas wadamada kale ayaa loo dhoofiyaa si loogu aaso. Qashinkaas la dhoofinayo waxaa ka mid noqon kara qashinka- nukliyeerka oo halis ah. Markaas waxaan arkey haamo waaweyn oo kaamka Ina allaale yaala, waxaan garan waayey waxa ku jirey haamahaas markii wadanka la soo gelinaayey iyo in la baadhey. Sidaa awgeed, waxaa loo baahan yahay in arintaas dib loo baadho shirkadahana alaabta ay wadanka soo gelinayaan la hubiyo, shirkadahan shiinahana wax walba wa ka suurtoobaan.
Waddanka Burma waa wadanka labaad ee adduunyada ee laga soo saaro daroogada loo yaqaano Heroin. Ganacsiga daroogadan waxaa ka soo gala dakhli aad u badan. Ganacsiga mukhaadaaradkan waxaa saami ku leh saraakiisha sare ee ciidamada oo ganacsiga qeyb ka ah kuwaas oo xukunka haysta. Shaqaalaha degan kaamamka shirkaduhu leeyihiin ee ka shaqeeya macdanta Jade-ka sadexdii qofba laba ka mid ah ayaa cuna oo qabatimay isticmaala Heroin-ka. Xaga Somaliland shaqaalaha ka shaqeeya Macdanta Jade-ka ugu yaraan 95% waxay cunaan muqaadaraadka Qaadka. Reer Burma iyagu makhaadaraadkooda wey beertaan, laakiin Somaliland waxaa isugu darsamey isticmaalkii daroogada iyo lacagtii oo wadanka banaanka uga baxeysa.
Gebogebada nuxurka warbixinta
Dadka degaankan ku nool waxaa yididiilo iyo farxad geliyey hadaladii barwaaqda xambaarsanaa ee ay wasiirada iyo shirkaduhuba ugu bushaareeyen. Maantase dadku waxay isweydiinayaan barwaaqdii loo sheegey. Mashruucan macdanta Jade-ka waxaa laga lahaa ujeeddooyinkan:
In maalgelin lagu sameeyo buuraha Fiqi-ayuub si loo soo saaro macdanta. Waxaa muuqata in maalingelin shirkaduhu ku sameeyeen degaanka sida qalab badan oo la keeney, shaqaale Shiine ahina yimaadeen, buurtiina la qarxiyey oo macdantii ku jirtey laga soo saarey. Lama yaqaan qaddarka maaliyadeed ee ku baxdey maaligelintan sababto ah wax daraasad oo la soo bandhigey ma jirto. Had iyo jeer waxaa qasab ah marka la doonayo in mashruucan oo kale la fuliyo in la sameeyo daraasad cilmiyeysan oo ay soo diyaariyeen khubaro aqoon u leh howshan la qabanayo, maadama mashruucani yahay mid aqoon iyo cilmi u baahan marka la fulinayo lagana taxadarayo waxyeeladiisa. Sida caadada ah daraasadda waa la soo bandhigaa oo laga doodaa si dadku wax uga ogaadaan. Wasaaradda macdanta iyo shirkaduhu haba yaraatee wax daraasad ah oo ay soo bandhigeen ma jirto. Waa nasiib darro mashruuca baxaaddaa leh ee taabanaya nolosha bulshada oo aan daraasaddiisa warba laga hayn.
In macdanta la soo saaro oo qaranka iyo degaankaba dakhli ka soo galo, waxay ahayd aragti feker wanaagsan xambaarsan. Sidoo kale soo saaridda macdanta buuraha Fiqi-ayuub waxay dani ugu jirtey reer Fiqi-ayuub, waayo waxay kobcineysaa dhaqaalahooda. Iyadoo fekerkaa laga duulayo ayaa waxaa degaankii loo fasaxey niman Shiineys ah oo dalalka qaar soo rogey sida Burma oo kale, mashruucan oo kalena ka fuliyey sidaan kor ku xusey. Buurihii waa la qarxiyey waxaana la yidhi waxaa la soo saarayaa dhagaxa JADE-ka oo nimankan shiinaha ayaa faraha looga qaadey, iyadoo aan cidiba ilaalineyn nooca macdanta ah ee ay loo baxayaan, xitaa kaamamka ay buuraha ka dhisteen ma joogaan aqoonyahano ka socda wasaarada macadantu. Arrinkani wuxuu la mid yahay adigoo beer leh, beertana ay ku yaaliin noocyo kala duwan oo midho ah, dabeedna nin marti ahi kuu yimi oo ku yidhi waxaan doonayaa in aan cambe ka soo gurto beertaada. Ninkii waxaad ku tidhi waan iska tegayaaye soo guro cambaha, ninkiina noocyadii midhaha ahaa beerta ku yaaley ka wada gurtey sida liinta, babayga, cambaha iwm, ileyn ninkii beerta lahaa iska tegye, ilaalana uma dirsan. Hadaba shiine la ogyahay dhaqan xumada ay adduunyada ka sameeyeen, waxaa cajiib ah in dhulkan faraha looga qaadey iyaguna waxay doonaan ku sameeyaan.
In la abuuro shaqo oo dadka Somalind shaqo ka helaan mashruucan, gaar ahaan dadka degaanka degan. Waxaa shirkadahan shaqo ka heley dad kuuli ah, shaqo abuurkii weynaa ee la filaayeyna lama fulin. Kuuligan xuquuqdii loo balan-qaadeyna looma dhismeystirin oo sidii la doono ayaa loola dhaqmaa, waxaadna mooddaa muwaadiniintii in ay waddan shisheeye u shaqo tageen. Shaqaalahan waxaa loo balanqaadey guryo, caymis, caafimaadkooda la ilaaliyo, mushahar iyo raashin. Laakiin kuuligu waa dad danyar ah oo xoola dhaqata ah badankoodu, waxayna ku shaqeeyan xaalad aad u qalafsan oo kuwa loo dadaalo waxaa maalintii la siiyaa 10 dolar, waxayna shaqeeyaan 8–10 saacadood. Runtii dakhligaa yar ee kuuliga soo gala waa ka muqdaa degaanka oo waxaad dareemeysaa dhaqdhaqaaq dhaqaale markaad joogto Fiqi-ayuub. Hadii la fulin lahaa balanqaadkii ku saabsanaa ilaalinta xuquuqda shaqaalaha, shaqaale badana la qori lahaa isbedel muuqda ayaa la arki lahaa. Maantase waxaa balanqaadkii laga hayaa tiro yar oo kuuli ah oo dulman.
In horumarin bulsho oo muuqda laga sameeyo degaanka gaar ahaan in la horumariyo caafimaadka, waxbarashada, biyaha iwm waxay ahaan lahayd isbedel bulsho oo dhaca. Balse sidaan kor ku sheegey dadka deegankan degani waxay ahaayeen dad go’doonsan oo ka xidhan dalka intiisa kale adeega bulshadana aan haysan oo baahi weyn u qabey in wax lagala qabto. Markii la yidhi dhulkiinii ayaa macdan laga heley oo waxbaa la idinku qabanayaa dakhliga ka soo baxa, dadkii farxad iyo yididiilo ayaa gashey, rajadoonina waxay noqotey in barwaaqo la geli doono, lagana raysan doono fakhriga iyo daryeel la’aanta. Markaa waxay gacmo furan ku soo dhoweeyeen shirkadihii kuwaas oo balanqaadey in ay wax ka qabtaan arimaha sida caafimaadka, waxbashada, biyaha iwm. Maanta balanqaadkaas waxba lagama hayo wuxuuna noqdey hal bacaad lagu lisey. Runtii, shacabka dhulkan degan waxaa lagu sameeyey dulmi kii u weynaa ka dib markii hantidii ay awoowayaashood ka dhaxleen hadh cad laga faramaroojiyey, shirkadahan iyo dawladoodii ay gacanta u geliyeen hantidoodii kuna aamineen. Markaad aragtid sida dhulka loo galey, hantida lala baxay iyo dadkoo beerka dhulka ku haya, waxaad dareemaysaa in dadka iyo degaankaba lagu tuntey ilaa xad aan la qiyaasi karin. Waxaa meel lagaga dhacey xuquuq bini’aadamnimo iyo tii degaanba. Shacabkii daacadda ahaana inta la hoosaasiyey ayaa dushooda lagu shaxey oo hantidooda laga gacan-maroojiyay iyadoo aan loo tudhin dad, duunyo iyo degaanba.
In kaabayaasha dhaqaalaha horumarin lagu sameeyo sida waddooyinka, korontada iwm. Balanqaadkaas waxba kama suurtoobin marka laga reebo waddooyin yaryar oo shirkaduhu kaamamkooda u sameysteen si ay u gaadhaan meesha ay macdanta ka qodayaan. Ma jiro wax waddo ah oo ay u dhiseen dan ummadeed, waxayna ahayd in kaabayaasha dhaqaale wax walba laga horeysiiyo.
Waxaa iska cad marka mashruucani dhammaado buurtana lagala baxo macdanta iyo kheyraadka, in dhulku u ekaan doono sida sawirka sare u egyahay. Maxsuulkuna noqon doono in degaankoo dhan laga guuro oo aan dib looga sugi doonin manaafacaad dambe iska daa dhaqasho xoolaade. Marka roobku da’o sida Burma ka dhacdey oo kale dhulka ayaa keligii socon doona isagoo ka kooban dhooqo, ciid iyo dhagxaan. Dhulka sidaa ahi wuxuu halis gelin doona dadka iyo xoolahaba, iyadoo ay ka dhalan karto masiibo aan xal loo heli doonin. Dhulkeenan ilaahey nimcada inoo dhigey waxay ahayd in dawladdu iyo shirkaduhu si mas’uuliyad leh u maamulaan gaar ahaan mashruucan, dadka degaankana talada iyo maamulka wax ka siiyaan si kalsooni iyo wada-shaqeyn loo abuuro. Waxaase cajiib ah oo yaabkeeda leh, talo iska daayee waxaaba wax lala yaabo noqotey, in hadii dadku danahooda ka hadlaan loo cagajugleynayo oo awood dawladeed loogu hanjabayo. Dadkan daganaanta iyo dawlad ogolka laga dareemey aawadeed, ayaa kalifey in wax aaney raali ka ahayn lagula koco, hantidoonina fara-dhexdood laga saaro iyadoon waxba loo reebin. Shirkadahan Shiinaha waxaa ilaaliya askar, kharashkoodana sidaan maqley waxaa bixiya isla shirkadaha, iyadoo dadkii dhulkan lahaana ka khatan yihiin kheyraadkoodii. Dabcan sida Burma ka dhacdey waxaa loo daneeyey shirkadahan Shiinaha, shacabkiina waa laga daneystey. Dadka dhulkan degani waa shacab aaminsan in maamulka dawladnimadu ka hirgalo, dhulkoodana ka shaqeeyo si adeeg bulsho loo helo laakiin hadda waxay dareemayaan in wasaaraddii macdanta ee ay aamineen ay gebi ahaanba ku balan furtey, hantidoodiina u gacan gelisey dad ajnebi ah oo aan u naxayn. Dawladu waxay dawlad ku tahay dadkeeda oo ay kalsooni ka hesho, kalsoonidana waxaa keena marka dawladu adeega bulshadu u baahan tahay si wanaagsan oo hufnaan leh ugu qabato, hantidoodana u ilaaliso. Laakiin hadda waxaa degaankan ka muuqda in adeeg waxtar ah daaye hantidoodii laga qaatey oo sidii la doono loogu tagri faley, iyadoo aan la dhowreyn nidaamka dawladnimo ee ku dhisan isla xisaabtanka iyo hufnaanta maamul wanaag ee dadku qeyb ka yihiin.
Sidaa awgeed, dawlad, shirkado, maamul iyo aqoonyahanaba waxaan u soo jeedinayaa in shir la isugu yimaado oo dib loo xisaabtamo, danta laga hadlayaana noqoto badbaadada dadka, xoolaha iyo degaanka. Dadkeenu waxaa weeye xoolo dhaqato, noloshooduna waxay ku xidhan tahay xoolaha nool, nolosha xooluhuna waxay ku xidhan tahay bedqabka degaanka, markaa waxa loo baahan yahay in mas’uuliyad la iska saaro badbaadinta dadka iyo dalkaba.